International Archives - Golden Place
တရုတ်နုိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ကဒုတိယနှစ် ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ဟာဘောလုံးပွဲရှုံးကြွေးတွေကြောင့် ၇ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လင်းလို့ အမည်ရတဲ့ အဲဒီကျောင်းသားဟာပိုက်ဆံပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။ အတင်းအကြပ် မတောင်းပါနဲ့ စသဖြင့် တယ်လီဖုန်းကို ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာအောင်ေ...
Do you use Gas for cooking? Must Read. Please read this and take note. Let this not happen to you. This could beacommon mistake in any household. This shocking accident happened on 13th Feb 2013. A housewife died due to burns sustained in the kitchen. Her husband too was hospit ...
The Hunger Games ဇာတ်ကားတွေရဲ့ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Peter Rodger ရဲ့ သား Elliot Rodger ဟာ သောကြာနေ့ ညက ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ လူခြောက်ဦးကို ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် Elliot ဟာ ဒီသတ်ဖြတ်မှုကို မစတင်ခင် နာရီပိုင်းအလိုမှာ သူ့ ရဲ့မိဘနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန် အပါအ၀ ...
May 30 2014 No Comments
This is the trickiest part of my blog: with the passage of time I believearetrospective of our month in Myanmar could beasource of practical information, certainly for travellers without any/little knowledge of Myanmar. That said: these are my reflections and my opinion ande...
Myiek – May 8 saw the launch ofafirst flight from Myanmar’s Myeik to Thailand’s Bangkok. Myeik Public Corporation Limited and Myanmar Union Express Aviation Group operate the flight by leasing an aircraft from Myanmar Union Express Chartered Airline. “The New Gen-Airways plane ...
May 16 2014 No Comments
တကယ်တည်ရှိတယ်လို့ ယုံနိုင်စရာမရှိတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားအလှပဆုံးနေရာများ
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ထူးခြားလှပဆုံးနေရာတွေကို ခရီးသွားလာရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Travelandleisure က ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေက သွားရောက်ရိုက်ကူးထားပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက ခရီးသွားလာရတာ ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် ပြန်လည ...
8 TRAVEL TRICKS EVERY TRAVELLER SHOULD KNOW
DIVIDE YOUR MONEY INTO MULTIPLE SAFE PLACES Wheneverpossible; divide up your travel cash and even credit cards into multiple safe spots. If you’ve got all your money in one place, it only takes one time forathief to totally wipe you out. You can even apply this idea when you’re ...
ဆင်းရဲသား ပရိတ်သတ်ကို လေဒီဂါဂါက နှင်းဆီတစ်ပွင့်ပေး
ပရိတ်သတ်တွေကြားထဲမှာပါ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ပုံစံပေါက်နေတဲ့ အသက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို လေဒီဂါဂါ မှ ငွေကြေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်ပေမယ့် ရှက်ရွံ့ နေပုံပေါက်နေတဲ့ ယင်း လူကြီးကို လေဒီဂါဂါမှ ယခုလိုဖက်ပြီး ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံဖို့ ကြိုးစားတော့"ကျနော့ကိုယ်က အနံ့တွေ ထွက်နေတယ်" လို့ ရ ...
Steve Jobs ရဲ့ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Spaceshipရုံးချုပ်
Steve Jobs ရဲ့ နောက်ဆုံးစိတ်ကူးဖြစ်တဲ့ Spaceship လို့အမည်ပေးထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ရုံးချုပ်ကိုယခုအခါတည်ဆောက်ရန် အတည်ပြုခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။မူလကဒေါ်လာ 3ဘီလျံကုန်ကျမည် ဟုခန့်မှန်းခဲ့ကြသော်လည်းယခုပြန်တွက်သောအခါ 5ဘီလျံ ကုန်ကျမည်ဖြစ်သောအဆိုပါ Spaceship ရုံးချုပ်သည် Califonia ပြည်နယ်ကCup ...
Nov 20 2013 No Comments